အကြံပြုချက်များ: 28 ချောကလက်အရသာရှိသောချက်ပြုတ်နည်းများ || DIY အပြင်အဆင်အကြံပြုချက်များချောကလက်, အချိုပွဲများနှင့်ကိတ်မုန့် - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » VIDEOS "အကြံပြုချက်များ: 28 ချောကလက်အရသာရှိသောချက်ပြုတ်နည်းများ || DIY အပြင်အဆင်အကြံပြုချက်များချောကလက်, အချိုပွဲများနှင့်ကိတ်မုန့်
အကြံပြုချက်များ: 28 ချောကလက်အရသာရှိသောချက်ပြုတ်နည်းများ || DIY အပြင်အဆင်အကြံပြုချက်များချောကလက်, အချိုပွဲများနှင့်ကိတ်မုန့်
Tele RELAY တစ်ခု 15 စက်တင်ဘာလ 2019
ငါသည်ငါ၏အဆွေတို့အဘို့မုန့်ပြားအောင်ချစ်ပြီးတစ်ခါတစ်ရံတွင်ကကိတ်မုန့်အလှဆင်နှင့်အထူးတစ်ခုခုလုပ်ဖို့လွယ်ကူသည်မဟုတ်။ ဤအချိန်ကသင်ချက်ပြုတ်ဖို့ကျွမ်းကျင်မှုမရှိကြပါဘူးလျှင်ပင်အမျိုးမျိုးအချိုပွဲကိုအလှဆင်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူပါလိမ့်မယ်။ ချောကလက်လိပ်ပြာ, ချောကလက်ဖလားနဲ့အရွက်ကိုလုပ်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူ!
ငါသည်အဦးဆုံးသောစိတ်ကူးကိုကြိုက်! ပူဖောင်းထုပ်ပိုးပြီးသုံးပြီးလှပသောချောကလက်အလှဆင်ထားပါ။ အဆိုပါမိုက်ခရိုဝေ့ထဲမှာချောကလက်အရည်ဖြစ်ကြ၏။ စားပွဲတစ်ခုနှင့်ပြန့်ပွားအရည်ကျိုချောကလက်အပေါ်ရာအရပျပူဖောင်းထုပ်ပိုးပြီး။ အေးခဲခြင်းနှင့်ထို့နောက်ပူဖောင်းထုပ်ပိုးပြီးဖယ်ရှားလိုက်ပါ။ နောက်တစ်နေ့သင်ခန်းစာဒဏ်ငွေချောကလက်လိပ်ပြာစေရန်သင့်အားသွန်သင်မည်။ တစ်ဦးလိပ်ပြာပုံတစ်ပုံကို Print နှင့်စာအုပ်ထဲမှာနေရာ, ဖယောင်းစက္ကူတွေနဲ့ဖုံးအုပ်နှင့်အရည်ပျော်မှုချောကလက်နှင့်အတူပုံစံခြေရာကောက်။ အဆိုပါလိပ်ပြာသဘာဝကြည့်ပေးစေခြင်းငှါ, ပွင့်လင်းစာအုပ်ထဲတွင်အချောလိပ်ပြာထားပါ။ သငျသညျခြေလှမ်းသင်ခန်းစာအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခြေလှမ်းကိုချစ်ပါလိမ့်မယ်။
သင်အလွယ်တကူလှပသောချောကလက်အရွက်စေနိုင်သည်အရည်ပျော်မှုချောကလက်နှင့်အတူ Mint အရွက်များဖုံးလွှမ်းနှင့်အေးမြပါစေ။ သဘာဝအရွက်ကိုဖျက်ပစ်ရန်နှင့်သင့်အလှဆင်အဆင်သင့်ပါ!
ရေခဲမုန့်အစေခံသို့မဟုတ်ရေခဲနှင့်အတူကအလှဆင်ဖို့ချောကလက်တစ်ပန်းကန်ကိုပြင်ဆင်ပါ။ တစ်ဦးပူဖောင်းဖောင်းပွပြီးပန်းကန်ထဲမှာချောကလက်အရည်ဖြစ်ကြ၏။ အဆိုပါအရည်ကျိုချောကလက်တစ်ဘောလုံးကို Place, ကို turn off နှင့်အေးမြပါစေ။
00: 58 ချောကလက်လိပ်ပြာ
04: 51 ချောကလက်ဆူညံသံ
06: 40 ချောကလက်ဖလား
07: 29 အိမ်သူအိမ်သား iced ကိတ်မုန့်
ရှမွေလသည် Eto'o တစ်ဒဏ္ဍာရီများ၏အငြိမ်းစား - ဗွီဒီယို
VIDEO - Sadio လည်ဆံဟာငြင်းခုံမို Salah ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုထုတ်ဖော်ပြသ